စန်းယု၊ ဦး (နိုင်ငံတော်သမ္မတ) - ဝီကီပီးဒီးယား
စန်းယု၊ ဦး (နိုင်ငံတော်သမ္မတ)
နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ (အငြိမ်းစား)၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ (အငြိမ်းစား)နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယု (အငြိမ်းစား) အား မတ်လ ၃ ရက် ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်ခရိုင်၊ သဲကုန်းမြို့၌ အဖ ဦးစံဖေ၊ အမိဒေါ်ရွှေလဲ့တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဦးစန်းယုကို ဖွားမြင်ပြီးနောက် မိခင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ဖခင်သည် ဘီ-အို-စီ ဌာနတွင် အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြု ခဲ့သည်။ ဦးစန်းယုသည် ဒေါ်ရွှေလဲ့၏မိခင်ဖြစ်သူ အဘွားနှင့်အတူ ငါးနှစ်အရွယ်အထိ နေထိုင်ပြီးနောက် ရွှေတောင်မြို့တွင် နေထိုင်သည့် ဖခင်ထံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်က ရွှေတောင်မြို့နှင့် ပြည်မြို့ရှိ အမျိုးသားကျောင်းနှင့် အစိုးရကျောင်း များတွင်ပညာသင်ယူသည်။ ကျောင်းနေစဉ် သပိတ်မှောက်လုပ်ငန်းများ၌ တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် အခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူ တစ်နေ့တာအဖမ်းခံရသည်။ ဆယ်တန်းကို ရွှေတောင်မြို့မှ အောင်မြင်ပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက ရန်ကုန်မြို့ ဆေးကျောင်းတွင် ဒုတိယနှစ်အထိ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကျောင်းသားသပိတ်၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဦးစန်းယုသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် အမှတ် ၃ ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း၌ ဒုတိယဗိုလ်အဆင့်ဖြင့် တပ်စုမှူးအဖြစ် တပ်မတော်တာဝန်ကို စတင်ထမ်းဆောင်သည်။ Junior Officer Course (J. O. C) နှင့် U E O S Course No.4တက်ရောက်ပြီးနောက် ဖျာပုံခရိုင်တွင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်၍ နှိမ်နင်းရေး တာဝန်ယူရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်သည်။ ဖျာပုံ၊ ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ မအူပင်၊ ညောင်တုန်း ဒေသ တိုက်ပွဲ၊ ဝက်ကော်တိုက်ပွဲ၊ အင်းစိန်တိုက်ပွဲ၊ ပဲခူး၊ ဒိုက်ဦးစစ်မျက်နှာများမှ တစ်ဆင့် တောင်ကြီး စစ်မျက်နှာ အထိပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဦးစန်းယုသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဖြင့် ဒုတိယတပ်ခွဲမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးတာဝန်များကိုလည်း ကောင်း၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဗိုလ်မှူးအဆင့်ဖြင့် ဒုတိယတပ်ရင်းမှူးတာဝန်ကို လည်းကောင်း အမှတ် ၃ ဗမာ့သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်း၌ပင် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်သို့တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး အမှတ် ၁ အရေးပေါ် ကယားသေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း၌ တပ်ရင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ကလောတွင် အခြေစိုက်ပြီး ကလော၊ မိတ္ထီလာနှင့်လွိုင်ကော် ဒေသများကို တာဝန်ယူရသည်။
ဦးစန်းယုသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၌ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပါတီစည်းရုံးရေး ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ပါတီစည်းရုံးရေး ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လတွင်ပါတီစည်းရုံး ရေး ဗဟိုကော်မတီကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး စီမံကိန်းကော်မတီကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာဒုတိ ယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်းသောအဖွဲ့ဝင် ၉၇ ဦးပါဝင်သည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် အကြံ ပေးချက်များ ရယူရေး အဖွဲ့ခွဲ ၅ ကချင်ပြည်နယ်)၊ အဖွဲ့ခွဲ ၁၂ (မန္တလေးတိုင်း)၊ အဖွဲ့ခွဲ ၁၅ (ရန်ကုန်တိုင်း) တို့တွင် အဖွဲ့ခွဲခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် တပ်မတော် ပါတီကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ် ခြင်းခံရသည်။
ဦးစန်းယုသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ် ပထမအကြိမ်ပါတီ ညီလာခံ၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဒုတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံ၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ် တတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံနှင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ် အရေးပေါ် ပါတီညီလာခံတို့တွင် ပါတီဗဟို ကော်မတီဝင်နှင့် ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် စတုတ္ထအကြိမ် ပါတီညီလာခံတွင် ပါတီလုပ်ငန်းစိစစ်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တာဝန် ပေးအပ်ခံ ရသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် ပဉ္စမ အကြိမ်ပါတီညီလာခံတွင် ပါတီဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးပေါ် ပါတီညီလာခံတွင် ပါတီဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှ အနားယူသည်။
ဦးစန်းယုသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်သော အရေးတော်ပုံတံဆိပ်၊ လွတ်လပ်ရေးစည်းရုံးမှုတံဆိပ်၊ လွတ်မြောက်ရေးတံဆိပ်၊ လွတ်လပ်ရေး တံဆိပ်၊ စတားတံဆိပ်၊ ဘားမားစတားတံဆိပ်၊ ကမ္ဘာစစ်တံဆိပ်၊ စစ် မှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်၊ နိုင်ငံတော် စစ်မှုထမ်းတံဆိပ်၊ ပြည်ပရန်နှိမ် တံဆိပ်၊ ပြည်သူ့စစ်တိုက်ပွဲဝင် တံဆိပ်၊ သီရိပျံချီဘွဲ့၊ သရေစည်သူဘွဲ့၊ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင်(ပထမဆင့်)နှင့် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့(ပထမဆင့်) တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဦးစန်းယုသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့နေ ပညာမင်းကြီး၏ အပါးတော်မြဲ ဦးရှိန်ဝှက်နှင့် ဒေါ်သန်းရွှေတို့၏ သမီး၊ အင်းစိန်အစိုးရကျောင်း ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်သန်းရှိန်နှင့် လက်ထပ် ခဲ့သည်။ သမီးလေးဦးထွန်းကား၍ သမီးများမှာ ဒေါ်လဲ့လဲ့ယု၊ ဒေါ်ခင်ဆွေယု၊ ဒေါ်အေးသန်းယု၊ ဒေါ်စောယုမွန် တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့တာဝန်များကို ကိုယ်ကျိုးမဖက် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ (အငြိမ်းစား)၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ (အငြိမ်း စား)နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (အငြိမ်းစား) ဦးစန်းယုသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဒေါ်သန်းရှိန်နှင့် သမီးလေးဦး၊ မြေးခြောက်ဦးကျန်ရစ်သည်။ 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စန်းယု၊_ဦး_(နိုင်ငံတော်သမ္မတ)&oldid=406531" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။